Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindise Sharciyeedka Dalxiiska Qaranka Cusub ee Hindiya
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska ee Siyaasadda Dalxiiska Qaranka
Wasiirka Golaha Wasiirrada ee Dhaqanka, Dalxiiska iyo Horumarinta Gobolka Waqooyi -bari (DoNER), Dowladda Hindiya, Mudane G. Kishan Reddy, ayaa maanta sheegay in waaxda dalxiiska ay tahay mid ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee Hindiya kobaca dhaqaalaha iyo abuurista shaqooyinka.
Siyaasaddan cusub ee dalxiiska ayaa siin doonta jawaabo habboon, maalgashiyo, iyo taageero laga helo panchayats gram tuulooyinka dawladaha.
Istaraatiijiyad qabyo ah ayaa iyaduna ku jirta hawsha horumarinta warshadaha dalxiiska MICE.
Wasiirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in xoogga la saaro ma aha oo kaliya soo nooleynta qaybta balse waaxdan laga dhigo mid ka mid ah darawalada soo nooleeya dhaqaalaha.
“Dowladdu waxay ku guda jirtaa diyaarinta Siyaasadda Dalxiiska Qaranka ee cusub ee Hindiya. Waxaan ku boorinayaa dhammaan daneeyayaasha inay ka qaybqaataan diyaarinta Siyaasadda cusub ee Dalxiiska Qaranka, ”ayuu yiri Mudane Reddy.
Isagoo ka hadlayaSocdaalka 2aad, Dalxiiska & Marti -gelinta E Caddaynta - Adkaysi & Waddada Soo -kabashada, ”Oo ay qabanqaabisay FICCI, Mr. Reddy wuxuu yiri:“ Markaan qaadanno siyaasadda cusub, waxay waxtar u yeelan doontaa, gaar ahaan daneeyayaasha. Siyaasaddan, waxaan ka heli doonnaa jawaab habboon, maalgelinno, iyo taageero laga helo panchayats gram gram ilaa dowladaha. ”
Mudane Reddy wuxuu kaloo caddeeyay inay sidoo kale dejiyeen istaraatijiyad qabyo ah horumarinta dalxiiska MICE dhammaan daneeyayaashana waa in ay hor yimaadaan oo ay fikirkooda la wadaagaan. “Daneeyayaashu waa inay sidoo kale ku riyaaqaan dowlad -goboleedyada si ay u siiyaan xaaladda warshadaha dalxiiska maadaama tani ay si weyn uga caawin doonto horumarinta waaxda, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha. Si loo gaaro kartida dhabta ah ee dalxiiska, shardiga aasaasiga ahi waa in la hubiyo isuduwidda heer kasta oo hawsha ah. Waxaan u baahannahay inaan helno hab firfircoon oo ka imanaya daneeye kasta oo ay ku jiraan warshadaha, dawladda gobolka, iyo dawladda dhexe, ”ayuu raaciyay.
Isagoo ka hadlaya dadaallada kala duwan ee ay xukuumaddu qaaday, Mudane Reddy wuxuu sheegay in dowladda dhexe ay kaalin muhiim ah ka qaadato kobcinta dhaqaalaha soo booqda oo xoog leh taas oo ay ka muuqato xaqiiqda ah in Wasaaradda Dalxiiska ay iyaduna qaaday qorsheyaal badan, sida Ololaha Hindiya 2.0 ee aan la rumaysan karin oo diiradda saaraya alaabada dalxiiska ee niche oo ay ka mid yihiin fayoobaanta iyo dalxiiska dalxiiska, iyo sidoo kale maalgashiga warshadaha iyada oo loo marayo qorshayaal, sida PRASHAD iyo Swadesh Darshan oo ay weheliso kordhinta fiisaha elektaroonigga ah ee 169 dal, taas oo la xaqiijiyay inay ku guulaysatay kordhinta tirada booqdayaasha ajnabiga iyo kuwa gudaha Hindiya.